Xildhibaanno dowladda ku eedeyay khiyaano Qaran – Kalfadhi
Gellinkii dambe ee shalay magaalada Muqdishu, waxaa kulan ku yeeshay qaar kamid ah xildhibaannada Labada gole ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaas oo dowladda ku eedeyay in ay si bareer ah u baalmartay qodobo kamid ah Dastuurka Ku-meel-gaarka ee dalka u yaalla.
Xildhibaannada waxaa ay soo-saareen, warsaxaafadeed ay ku sheegeen in qodobadaasi la baalmaray ay u aqoonsanayaan khiyaanno Qaran, waxaana qodobbada la baalmaray ay ku shegeen.
“In dowladda ay hareer-martay qodobadda 10, 12, 21 aad, kuwaasi oo ka hadlaya xorriyadda isu-socodka, xuquuqda iyo karaamada Aadanaha. Sidoo kale waxaa ay shegeen in dowladda ay jabisay qodobada 58aad iyo 50 aad, kuwaas oo ka hadlaya mabaadi’da federaalka iyo qaab dhismeedka dowladda”.
Dhinaca kale, waxaa ay xukumadda ku eedeyeen in ay ku guul-dareysatay gudashada waajibaadkii loo igmaday oo ay kamid yihiin, amniga iyo wada jirka dowladda dhexe iyo dowlad-gobolleedyada, dib-u-dhiska, qabyatirka Dastuurka, hanaanka Doorashooyinka, dhameystirka haya’addaha dastuuriga ah, sida garsoorka iyo xuquuqul insaanka.
Maxaa xiisadaha siyaasdeed iminka soo kiciyay?
Shirarka iyo xiisadaha siyaasadeed ee dalka iminka kusoo kordhay ayaa waxaa ay soo shaac baxeen, kaddib markii dowladda xayiraad ay saartay safar Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ugu ambabixi lahaa magaalada Kismaayo.
Xisbiga Himilo Qaran ee Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa warsaxaafadeed ka soo saaray go’aankii ay masuuliyiinta dowladda Soomaaliya uga horistaageen inuu Sh shariif u safro Kismayo si uu uga qeybgala caleemka saarka madaxweynaha Jubbaland oo mar kale ku guuleystay doorasho lagu muransan yahay.
Xildhibaan Maxamuud Cali Magan “Dalkeyga beec ma ahan, dadkiisuna badeeco ma ahan”